छिमेकीले दिएको खाना खाएर हुर्केकी यी कलाकार यसरी बनिन् सबैभन्दा धनि – Patrika Nepal
छिमेकीले दिएको खाना खाएर हुर्केकी यी कलाकार यसरी बनिन् सबैभन्दा धनि
मंग्सिर ७, २०७८ मंगलबार 37
नोभेम्बर २५ बलिउड कलाकार राखि सावन्तको जन्मदिन हो । बलिउडमा राम्रो नतर्कीका रुपमा सबैले राखी सावंतलाई चिन्छन्। उसको धेरै फ्यान छन् । आज राखीलाई कुनै अभाव छैन । नाम दाम सबै छ । तर थोरैलाई मात्र थाहा छ कि राखीको बाल्यकाल निकै अभावमा वितेको थियो।
राजीव खंडेलवालको शो भावनामा राखीले उनको बाल्यकालको बारेमा बताएकी छन् । आफ्नो बाल्यकालका बारेमा बताउँदा उनका आँखा भरिएका थिए । बाल्यकालमा कति समस्या भोगिन् त्यो कल्पना गर्न पनि सकिदैन । उनको आजको सफलतालाई लिएर उनको बाल्यकाल त्यस्तो थियो होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । राखीको वास्तविक नाम नीरू भेरा हो।
आफ्नो बाल्यकालको बारेमा कुरा गर्दै, राखीले भनेकी थिई मेरो हात काँप्छन्, वास्तविकता बताउन मेरो मनले मान्दैन । मैले धेरै गरिबी देखे। यति गरिबी कि जब म आमाको पेटमा थिएँ, मेरी आमाले इट्टा र ढुंगामा खाना पकाउँनुहुन्थ्यो। म यस्तो गरिब परिवारकी छोरी हुँ ।
राखीले अगाडी भनिन्, आमा भन्छिन् जब म सानो थिए, हामीसँग खानेकुरा थिएन। छिमेकीहरूले खानेकुरा बाहिर फ्याँक्थे त्यो खानेकुरा आमाले ल्याउनु हुन्थ्यो अनि हामी त्यही खान्थ्यौ ।
“जब म ठूलो भएँ, म आमालाई मैले म स्कूल जान्छु भने । तर त्यो सम्भव थिएन । मलाई बाल्यकालदेखि नै अभिनय र नृत्यको एकदमै मनपर्ने थियो। तर मेरो परिवारमा यो खासै मन पराइएन। मेरो कुनै गॉडफादर थिएन। म पढे लेखेको पनि थिइन् । म इन्डस्ट्रीमा आउँदा मलाई केहि पनि थाहा थिएन। मलाई अभिनय थाहा थिएन।
तर नायिका हुनु पर्ने थियो। म फिल्म उत्पादकका साथ फोटो लिने गर्थे, उनीहरू कोठा भित्रबाट एक्लै अभिनय गर्थे।”
Prevआफै जुङ्गा मिलाउदै गरेको ओलीको यो तस्बिर कसले खिच्यो ?
Nextविवाह गर्ने तयारीमा नायिका रेखा थापा को हुन् उसका दुलाहा।
नेपालमा पनि ओ’मिक्रोन पु;ष्टिभएसंगै एकै दिन परिवारका ९ जना सहित १७ जनामा देखियो ओ’मिक्रोन !
युरोप प्रवेश गर्ने क्रममा मा’रिए ५ नेपाली, ३ जनाको पहिचान खुल्यो
रेश्मा घिमिरेले प्रभात बाबुसँग मंसिर १४ गते विवाह गर्दै
भारतमा ओ’मि’क्रोन संगै ना’काबाट दैनिक तीन हजार जनाको आवतजावतः सतर्कता न्युन !
मन्त्रालयकै गाडी भित्र यौन क्रियाकलाप गर्ने3जना पक्राउ (5503)
किन गर्दैछन् त स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरु धनगढीमा MCC बिरुद्ध कार्यक्रम ? (808)
बिजय शाहि जिउँदै भेटिए (696)
जनमैत्री अस्पताल मेरो होईन- रबि लामिछाने (601)
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको मुख्य द्वार प्रवेश गर्ने बित्तिकै खुशीले भक्कानीए तालिवान लडाकु ( भिडियाे सहित ) (459)
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (436)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (403)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (324)
दुई छोरीको मृत्यु भएको दुई वर्षपछि त्यही दिन जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिइन् भाग्यलक्ष्मीले
९ वर्षीया अभियान्ता प्रेन्सा रेग्मी ‘ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड २०२२’ मा चयन भएकी छिन् ।
बुद्ध एयरमा बेहुली लिएर गए , पोखराको दुईतर्फी टिकट सित्तैमा
१.	नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ को-रोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सत’र्क हुनुहोला, थाहै नदिइ ज्या’ न लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस (129)
२.	बिहे गरेको छोटो समयमै के भयो गोलमालका चर्चित कलाकार म्युकुरीलाई (114)
३.	सबैलाई सुरक्षित रहन भन्दै डाक्टरले गरे आत्महत्या, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला ! (107)
४.	ओमिक्रोन भेरियन्ट देखा परेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो यस्तो अपिल, अब के हुन्छ ? (99)
५.	कलिलो उमेरकी आफ्नो बुहारीसँग लगातार ४ बर्षसम्म स’म्बन्ध राख्ने ससुरा पक्राउ ! (98)
६.	दलालको माध्यमबाट बोलाएकी यौ’नकर्मी युवती आफ्नै श्रीमती परेपछि (91)
७.	२४ घण्टाभित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (90)
८.	२० गतेदेखि कडा लकडाउन गर्ने निर्णय,औषधि बाहेक अन्य सबै पसल बन्द? (87)